Sodaachisi Furmaata Hin Ta’u – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSodaachisi Furmaata Hin Ta’u
Sodaachisi Furmaata Hin Ta’u
Kumkummee Sirbaatiin, Bitootessa 8, 2020
Ibsa Komishanirri Polisii Oromiyaa kenne dhaggeeffadhee baayyeen gadde. Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo(QBO) beekuu dhabuu ykn utuu beekanii dogoggora seenaa hojjachuu ta’eetu natti mul’ate. Qabsoon bilisummaa Oromoo bu’aa bahii hedduu keessa dabree har’a gahe. QBO tti bubbeen hedduun ka’ee, roobni yandoon danuun itti roobee, gufuun lakkoobsa hin qabne isa rukute, dhabama hedduu dhaaf kaadhimamee, garuu isaan kana hundaa injifatee mo’ichaan guyyaa irraa guyyaatti humna dabalataa har’a gahe. Mee of duuba deebinee isaan kana keessaa garii tuquu dhaan wal haa yaadachiifnu.
Mootummooti Itophiyaa darabee aangoo qabatan hundii QBO dhabamsiisuu dhaaf waan hin godhiin hin qaban. Oromoon akka mataa ol qabatee bilisummaa isaaf hin qabsoofne waan hedduu yaalan. Jaarmayaa fi hoggana dhabsiisuuf takkaa rafanii hin bulle. Kan bara Minilik dhiifnee Haile Sillaaseen Waldaa Maccaa fi Tulamaa diigee, Jeneraal Taaddasaa Birruutti du’a murteessee, Hayile Maariyaam Gammadaa fi Maammoo Mazammir ajjeessee, qoondaalota WMT hidhaatti guuree QBO kan dhaamse itti fakkaate. Garuu sun hin taane.
Dargiin hogganoota ABO harka isaa galan, Jeneraal Taaddasee Birruu fi Koloneel Hailu Raggaasaa ajjeesee geerare. Kanaan QBO kan dhaamse itti fakkaate. Dabalees Muhee Abdoo, Qes Guddinaa Tumsaa fi kanneen biro ajjeessee qabsicha kan kolaase itti fakkaatee ture. Garuu hin taane.
Hogganooti ABO kan Hayyuu Dureen keessa jiru,qondaaloti 10 harka shiftoota Somaalee keessa bu’uun bakka tokkotti wareegamuun QBO tasa of duuba hin deebifne. Qabsoo hidhannoo dhiha Oromiyaatti saaqame kichuutti kutuuf, Nugusee Faantaa lola summii banee jaallan torba yoo wareegaman illee QBO jabaatee itti fufe malee of duuba hin deebine.
Bara 1992 yeroo ABO dhiibamee Chartara keessaa bahe, hogganni isaa wal qunnamuu hanqate, duulli guddaan WBO irratti banamee marfama kana hin jedhamne keessa seene, QBO itti fufa jedhamee hin abdatamu ture. Duulli sunis ni dhumate, duumeessi turees ni saaqame, ABO jabaatee qabsoo isaa itti fufe malee of duuba hin deebine.
Keessaan haala dhaabicha qunname irraa harca’iinsi hedduun dhaabicha qunnamu illee QBO jabaatee itti fufe malee of duuba hin deebine. Harca’uu fi qoqoodamuun humna bilisummaa laaffise malee dhabama hin fidne. Mootummaan Wayyanee ABO dhabamsiisuuf waan hin carraaqin hin qabu. Kun kaleessaa fi dheengadda ija keenya duratti ta’aa ture waan taheef wal yaadachiisuu hedduu hin barbaachisu.
Har’a wareegama ummatni Oromoo, keessaafuu kan Qeerroo fi Qarreen Oromoo kaffalaniin warri aangoo irra jiran, qabsoo Oromoo ganuun, injifannoo haga har’aatti ummatni Oromoo wareegama isaan argate haquuf, QBO hogganaa fi dhaaba dhabsiisuuf yeroo tattaafataa jiran argaa jirra. Ibsi kaleessa komishanerri polisii Oromiyaa kenne kana dhugoomsa.
Hogganootaa fi qabsaawota ABO hidhuun QBO dadhabsiifna, milkoofne ammoo dhabamsiifna jedhanii abjootaa jiru. Doorsisi kaleessa polisiin Oromiyaa dabarse QBO wallaaluu irraa kan madde natti fakkaata. Ummatni Oromoo kan qabsoo godhaa jiru kaayyoo isaa kan Abbaa biyyummaa fi abbaa mirgaa tahuu malee hoggana ykn dhaaba tokko ilaalee miti. Aadaa fi duudhaan ummata Oromoo kan yoo hogganni isaa du’e ykn hidhame faca’u miti. Hogganni hidhamu ykn du’u kumatu bakka bu’a. Sabboonummaa Oromoo sadarkaa amansiisa irra gahee jiru of duuba deebifna jechun tasa hin danda’amu.
Haalli amma deemaa jiru filmii Umar Mukatar jedhamu koloneel Gadaafiin hojjachiise tokko na yaadachiisa. Ummatni Libiyaa koloneeffatu mootummaa Xaliyaanii of irraa deebisuuf muratee ka’e. Maanguddoti Libiyaa jilba isaanii haadaan hidhanii dahannoo keessa taa’anii Xaaliyaanii lolan. Fakkeenyi gara biraan Dargiin lola lolaa ture keessatti yeroo rakkate qondaalota waraanaa warra soorama bahaniif waamicha godhe. Isaanis Abbaati Xoor jedhamanii waraanatti deebi’anii Dargiif lolan. Waan Dargiin godhatu gaarii dha jechuu koo utuu hin taane, QBO keessatti yeroo rakkinaatti, yeroo balaan dorrobee jirutti warri soorama bahe cal’isee waan ilaalu miti. Isuma kaleessa soorama bahetu qabsootti deebi’ee qooda isa irraa eegamu kenna. Kanaaf abjuun QBO jaarmayaa fi hoggana dhabsiifna jedhu tasa hin milkaawu.
Barruu kana makmaaksa tokkon xumura. “Namtichatu fincaan fincaa’a. Dubartiittiin kana argitee, ‘fincaa’uun waan jiruu qabanii raasuun eenyuun sodaachisuuf’ jette” jedhama. Qabsoo keessatti hidhamuu fi du’uun qabsaawotaa waanuma jiruu dha. ‘Isin hiina, eenyu iyyuu seeraa ol miti, ragaa qabatamaa qabna’ jechuun komishineerri polisii Oromiyaa eenyuun sodaachisuu dhaaf? Oromoo sodaachisuun kaayyoo isaa dabsina jedhanii yaaduun tasa hin milkaawu. Ummatni Oromoo kanniisa malee tuuta girrisaa miti.
Ummatni Oromoo sodaachuu kan qabu shira tokkummaa isaa diiguuf dalagamaa jiruu dha. Har’a ija keenya duratti Oromoo Wallaggaa adda baasanii duulli cimaan dirree bahee oofamaa jira. Har’a Oromoo kun Baalee dha, afaan Baalee dubbanna, kun Gujii dha, afaan Gujii dubbanna, fi kkf jedhamaa jira. Shirri Oromoo Tuulamaa fi Maccaa adda baasuun wal nyaachisuuf godhamaa jiru dammaqiinsa Oromoon fashaluu qaba. Yaa Ummata Oromoo tokkummaa kee diiguuf shira xaxamaa jiru sodaadhu, qolachuuf hidhadhuu ka’i. Injifannoon kan kee akka tahu shakkiin hin jiru.
Faaruu Hidhamtoota Oromoo
#FaaruuHidhamtootaOromoo Dhugaa keenya kan argu qabsumaa; Nu booddee hin deebinu tasumaa; Lafa keenyarraa nu buqqisanii,…
Gaaffii Oromoo Afaan Qawweetiin Ukkaamsuun Kaleessas Hin Danda’amne, Har’as Hin Danda’mu !
Gaaffii Oromoo Afaan Qawweetiin Ukkaamsuun Kaleessas Hin Danda’amne, Har’as Hin Danda’mu ! (Ibsa Adda Bilisummaa…
Honoring mothers and celebrating motherhood, we collected Oromo musics